Wararka - Xeerarka ajaanibka soo galaya Shiinaha ka dib Covid-19
Marka loo eego ku dhawaaqista Shiinaha ee Maarso 26, 2020: Laga bilaabo 0:00 Maarso 28, 2020, ajaanibta waxaa si ku meel gaar ah looga joojin doonaa soo gelitaanka Shiinaha iyagoo wata fiisooyin sax ah iyo sharci daganaansho. Gelitaanka ajaanibta sita kaadhadhka safarka ganacsiga ee APEC waa la hakiyay. Siyaasadaha sida fiisaha dekedaha, 24/72/144-saac ka dhaafida fiisaha gaadiidka, ka dhaafida fiisaha Hainan, ka dhaafida fiisaha safarka ee Shanghai, ka dhaafida fiisaha 144-saac ee ajaanibka Hong Kong iyo Macau si ay ugu soo galaan Guangdong kooxo ka socda Hong Kong iyo Macao, iyo Ka-dhaafitaanka fiisaha Guangxi ee kooxaha dalxiisayaasha ASEAN waa la hakiyay. Gelitaanka diblomaasiyadeed, rasmi ah, ixtiraam leh, fiisaha C ma saameyn doonto (kan kaliya). Ajaanibka u yimaadda Shiinaha si ay uga qayb qaataan hawlaha dhaqaalaha, ganacsiga, sayniska iyo farsamada ee lagama maarmaanka ah, iyo sidoo kale baahiyaha bini'aadantinimo ee degdega ah, waxay fiisaha ka dalban karaan safaaradaha Shiinaha iyo qunsuliyadaha dibadda. Gelitaanka ajaanibta leh fiisaha la bixiyay ka dib ku dhawaaqista ma saameyn doonto.
Ogaysiis Sebtember 23, 2020: Laga bilaabo 0:00 Sebtember 28, 2020, ajaanibka haysta shaqo Shiineys ah oo ansax ah, arrimaha gaarka ah iyo ogolaanshaha joogitaanka kooxda waa loo ogolyahay inay galaan, shaqaalaha ay khusaysona uma baahna inay dib u codsadaan fiisaha. Haddii saddexda nooc ee oggolaanshaha joogitaanka ee ajaanibka ahi ay dhacaan ka dib 0:00 Maarso 28, 2020, dadka haystaa waxay ka dalban karaan ergada dibloomaasiyadeed ee Shiinaha ee dibadda iyagoo wata ogolaanshaha joogitaanka dhacay iyo agabka khuseeya haddii sababta ay u imanayaan Shiinaha ay tahay mid aan isbeddelin. . Matxafku wuxuu dalbanayaa fiisaha u dhigma ee lagu soo galo waddanka. Shaqaalaha kor ku xusan waa inay si adag u hoggaansamaan xeerarka maaraynta ka hortagga faafitaanka ee Shiinaha. Waxaa lagu dhawaaqay 26-kii Maarso in tallaabooyin kale ay sii wadi doonaan fulinta.
Kadib dhamaadka 2020, safaarada Shiinaha ee Boqortooyada Midowday waxay soo saartay "Ogaysiis Hakinta Ku Meel Gaarka ah ee Gelitaanka Shakhsiyaadka UK ee wata Visa Shiinees ah iyo Ogolaansho Deganaansho" Noofambar 4, 2020 Dhawaan, safaaradaha Shiinaha ee ku yaal UK UK, France, Italy, Belgium, Russia, the Philippines, India, Ukraine, iyo Bangladesh dhamaantood waxay soo saareen ogaysiisyo saamaynaya in ajaanibka wadamadan ku nool ay u baahan yihiin inay qabtaan arinta ka dib Noofambar 3, 2020. Dal ku galka Shiinaha. Ajaanibka dalalkan looma ogola inay soo galaan Shiinaha haddii ay haystaan ​​ogolaanshaha joogitaanka shaqada, arrimaha gaarka ah, iyo kooxaha Shiinaha.
Ogow fiisaha ajaanibka ee dalalkan intii u dhaxaysay 28-kii March iyo 2-dii Noofambar ma lumin sharcinimadooda, laakiin safaaradaha iyo qunsuliyadaha maxalliga ah uma oggolaanin ajaanibtan inay si toos ah u aadaan Shiinaha, mana heli doonaan caddayn caafimaad (mar dambe ayaa loo beddelay. HDC code). Si kale haddii loo dhigo, haddii ajaanibka u dhashay dalalkan ay haystaan ​​​​saddexda nooc ee degenaanshaha ama fiisaha ee kor ku xusan inta u dhaxaysa March 28 iyo November 2, waxay geli karaan dalal kale (sida Maraykanka) si ay u aadaan Shiinaha.
Waqtiga boostada: Agoosto-10-2021
Conrod Bearing, Ku-Xiritaanka Matoorka, Dhaashaadka Ugu Sareeya Iyo Dhamaadka Dhamaadka Hoose, Saamaynta ugu weyn ee Matoorka Badda, Biraha B58, Ku riix In Connecting Rod,